Remangwana reCommerce neNLP - NewGenApps - DeepTech, FinTech, Blockchain, Cloud, Nhare, Ongororo
Munyika yanhasi inotungamirwa netekinoroji, kugadzirisa mutauro mutauro kana NLP kuyedza kubatanidza kubata kwevanhu kune internet ruzivo. Inopa purogiramu yako yekombiyuta kukwanisa kunzwisisa mutauro wevanhu nenzira iyo inotaurwa nayo.
Iko kune kuwandisa kwedata kunowanikwa munyika yanhasi yemazuva ano iyo inotyairwa nehunyanzvi uye iri kukura nekukurumidza kukurumidza. Iyi data inoda kurongwa muzvikamu kuti ive nechokwadi chekuti inoonekwa kana ichitsvaga. Izvo zvakakosha zvikuru kunyanya kana eCommerce mabhizinesi uye vatengesi. Injini dzekutsvaga seGoogle neBing dzinoita basa rakakosha mune iyi kesi sezvo ivo vachibatsira mushandisi mukuwana izvo zvinodiwa zvigadzirwa.
Inonyanya kukosha kune eCommerce mabhizimisi kuti aone uye aongorore zvinodiwa uye maitiro emutengi wavo. Kupa a zvirinani mutengi ruzivo makambani anoshandisa kuteerera kune avo vangangoita vatengi kuratidza online nerubatsiro rwe evanhu vezvenhau maforamu. Izvi zvinovabatsira kuti vanzwisise kuti ndeupi mutauro wemushandisi wavanogona kushandisa kutenga chimwe chinhu. Zvinogona kunzwika zviri nyore asi zvinoda yakawanda nguva uye kuedza kwevanhu, saka kushandisa machine learning uye AI ndiyo yakanakisa nzira yekuita izvi. Kutaurirana kwevanhu chiitiko chakakanganisika zvine mutsigo uye kuti uchinzwisise, imwe inoda ruzivo chairwo-rwepasirose sezvo nzira yatinotaurirana nayo ingashanduke nekukurumidza. Kune vanhu, izvi hazvishande, sezvo isu tichigona kuchinjika zviri nyore maererano nemitemo mitsva yekutaurirana. Asi haina kufanana nemakomputa, kwavari, ibasa rakaomarara uye rinodhura.
Zvakanakira NLP muCommerce
Achibatsirwa Natural Language Processing, michina inokwanisa nyore kutora pane chii mitsara nemashoko anowanzo shandiswa nevanhu pavanenge vachitsvaga chimwe chigadzirwa. Inobatsira mukugadzirisa kutsvaga kwevashandisi vari kudyidzana nesisitimu vachishandisa injini yekutsvaga. Iyo sisitimu inowana izvo izvo mushandisi ari kunyatso kutsvaga nekushandisa kwayo kunzwisiswa kwerudzi rwemutauro uye chimiro chemutongo wakashandiswa. Inoona mapatani uye inogadzira hukama pakati pemameseji kuti uwane zvirevo zvemavara asina kuumbwa.
Kuitwa kweiyo NPL modhi kunoenderana zvakananga nehuwandu hwe data uye mhando yedata iyo inodyiswa. The eCommerce masosi anofanirwa kufunga nezve dambudziko nemaslangs uye masinonimimi anoshanda zvakasiyana munzvimbo dzakasiyana. Lexical dhatabhesi anobatsira, asi anongogumira kuChirungu chete uye nekudaro haashande nemazvo muzvitoro zvepasi rese, izvo zvinoshandira kune vatengi vemitauro netsika dzakasiyana.
Mabhizinesi uye eCommerce vatengesi vanogona kushandisa NLP nenzira dzinotevera.
1. Kuongorora kwepfungwa
Simba rakakura rinodiwa kuti riongorore huwandu hwakawanda kwazvo hweasina kurongeka data. Asi nekuunzwa kweAI mumakomputa, mhinduro yemanzwiro, kuongorora uye kutsvaga zvinonzi zvakashata, zvakanaka uye zvisina kwazvakarerekera mhedzisiro. Zvinoita kuti zvive nyore kumakomputa kuti anzwisise kudyidzana kuri nyore. Nekudaro, mhinduro dzakaomarara dzinogona kuomesa kunzwisisa kwese kwe machine learning. Asi nzira dzinoverengeka dzinogona kushandiswa kuitira kupatsanura mazwi akaomarara kubva pamatanho akaomarara emitsara kuti uone chirevo chaicho chemitsara. Nekudaro, akakwirira matanho ekurongeka anogona kuwanikwa mukufungidzira chikamu nenzira dzakafanana.
2. Kuzivikanwa kwemavara
Izvi zvinobatsira mukuziva mavara, zvinyorwa nekuashandura kuita data nekuichengeta mu Database. Imwe yenzira dzekugadzirisa mutauro dzinoshandiswa neinjini dzekutsvaga ndeyekuverenga chinyorwa uye kuchishandura kuita muchina-encoded text. Inokupa mhinduro kumubvunzo pachinzvimbo chekuratidza mhinduro dzekutsvaga.
Vanhu vanogona kunyatsonzwisisa uye nekushingisa kunzwisisa mazwi maererano nechisungo chakanyorwa kana kutaurwa. Nekudaro, kudzidzisa komputa mamiriro ari kutaurwa mutongo ibasa rakaoma sezvo michina isinganzwisise mamiriro akareruka senge nei uye chii. Isu tese tinoziva kuti tsika inoita kuti tive vakakwana mukuita rakatarwa basa uye zvakafanana zvinoshanda pano zvakare kune muchina wepasi. Ivo vakapihwa yakawanda isina kurongeka uye mbichana dhata rekuongorora uye nerubatsiro rwemasimba algorithms, makomputa ari zvishoma nezvishoma achiwedzera kuve nekuwedzera kushanda mukunzwisisa iro rakati izwi mune mamiriro azvino akapihwa mamiriro.
4. Nzvimbo yevatengi nzvimbo yedhijitari
Iyo nzira yekushandura nzvimbo dzekufona pasina kudiwa kwemumiriri wevanhu inogona kuitwa nyore ne kushandisa michina. kudyidzana kwevatengi kunogona kubatwa nemazvo neAI masisitimu. Dzimba dzebhizinesi dzinogona kubatsirwa kuburikidza nechaiyo-nguva dynamics iyo inogona kunyatso kuvandudza zita rechiratidzo uye kuvimbika uye mukurumbira wayo kune ligi nyowani. Sevha imwe chete inogona kubata zviuru zvakati zvekufona. Sevha inotsvaga mibvunzo nekupenya uye inopa mhinduro yakanakisa kumutengi kana kutumira runhare kudhipatimendi rine chekuita nekushandisa hungwaru hwakaiswa seNLP. Izvi zvinobvisa maitiro anoshungurudza ekutsikirira makiyi senge "dzvanya 1, dzvanya 2" nezvimwe.
Chinangwa cheAI ndechekuvandudza mukurumbira we mabatiro evatengi uye kuderedza huwandu hwevatengi vasina kugutsikana. Iyo ine kumhanya uye simba iro rinobatsira mukusimudzira iyo yekutenga kutenderera nekutumira yambiro uye zvinonakidza zvinopihwa zvinoenderana nemamwe mapatani ayo akakosha kwazvo kuchengetedza mutengi uye kuvakurudzira kuti vadzokerezve maapplication kazhinji uye zvakare. Chatbots inogona kushandiswa kuita kudyidzana munharaunda uye mameseji anoshanda zvizere. Kushamwaridzana kwevanhu kunogona kugadzirirwa kugadzirisa nyaya nekukurumidza pachinzvimbo chekutumira email kukumbira kugadzirisa izvo zvinhu mukati memazuva matatu ekushanda. Izvo zvinonetsa kupaza kugadzira panguva imwe chete. Izvo zvinonyatso kukubatsira iwe mukuhwina rutsigiro rwevatengi mukuyedza kusvika kwavari uye nekupa isingaenzaniswi sevhisi.
5. Kubudirira kwemutengo
Funga, iwe unofanirwa kudzidzisa vashandi vako vese kune tekinoroji nyowani inogona kubatsira zvakanyanya mukuvandudza mashandiro ebhizinesi, wozopedzisira wabhadhara zviuru zvemadhora kuti tekinoroji iite basa. Wadii kuita tekinoroji inounza nayo njere dzine kushandisa michina Mapuratifomu akarongerwa kuve neruzivo rweindasitiri. Imba yega yega bhizinesi inoda kuve neyayo tekinoroji sezvo ichida kudzidziswa kamwe chete uye kana kukwidziridzwa kuchiburitswa.
6. Kuwana ruzivo
Ruzivo rwakagadziridzwa nezve kuongororwa kwevatengi nezve chigadzirwa chavo chinogara chichidikanwa nedzimba dzebhizinesi. Ivo vanofanirwa kuziva maitiro ehunhu uye zviyero zvakaenzana zvevatengi. Polls, maemail, pop-ups, mablog. evanhu vezvenhau zvakatumirwa, kufona uye mameseji anogona kubatsira mukuunganidza ruzivo rwunotarisirwa nemaapplication anofambiswa neAI. Kutsvaga kweruzivo hakutombogumi uye ruzivo rwakaunganidzwa runodudzirwa uye kuongororwa nenzira chaiyo.
Pane mabhenefiti makuru ekushandisa NLP mukati eCommerce. Nyika yebhizinesi yaizobatsirwa zvakanyanya kubva kune idzi dzakadzama njere dzinodzorwa neAI. Ichabatsira mukuwedzera kugutsikana kwevatengi uye ichavandudza curve yemari zvakare. Mazano akawanda uye ekuvandudza anotenderera pfungwa yeNLP achashandura ramangwana rekuita kwebhizinesi. Isu tinongofanira kumirira uye kuona iyo AI ichiitika makore anotevera. Ndiyo nzira inonyanya kushanda nguva, uye munyika yemakwikwi ebhizinesi, uyo anoziva kubata nekugadzirisa nguva yake anohwina mutambo.
Vanoda rubatsiro neako eCommerce saiti kana kutsvaga kwekutaura? Batana.